Tag Archive for "एसपी डिल्लीराज बिष्ट" - निर्मला हत्याको १०० दिन : हत्यारा पत्ता लागेन !
एसपी डिल्लीराज बिष्ट
निर्मला हत्याको १०० दिन : हत्यारा पत्ता लागेन !
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २ उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको बिहीबार एक सय दिन पूरा भएको छ। तर, अहिलेसम्म पनि हत्यारा पत्ता लागेको छैन । गत साउन ११ गते निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा घर नजिकैको उखुबारीमा शब फेला परेको थियो । तर निर्मलाका हत्यारालाई पक्राउ गरेर कारबाही गर्न सडकदेखि सदनसम्म उठेको आवाजलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरका... थप पढ्नुहोस्
निर्मलाका हत्यारा भेटिएनन, स्थानीयको डिएनए परीक्षण गरिदै !
कञ्चनपुर । १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्याका दोषी पत्ता लगाउन प्रहरी असफल भएको छ । बम दिदी बहिनी र बर्खास्तीमा परेका एसपी डिल्लीराज बिष्टमाथि केरकार गर्न नसकेको प्रहरीले स्थानीय व्यक्तिको डीएनए परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । घटनास्थल आसपास बस्ने व्यक्तिदेखि निर्मलाका आफन्तहरुको समेत डीएनए परीक्षण गर्न लागिएको प्रहरीले जनाएको छ । मंगलबार डीएनए परीक्षणका लागि थप चारजनाको रगत प... थप पढ्नुहोस्
निर्मलाको छानबिनमा गम्भिर लापरबाही गर्ने एस्पी बिष्टका चार वटा सिम थुतिए !
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरुबाट गम्भीर लापरबाही भएको ठहर गरेको छ। एआइजी धिरु बस्न्यातको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरुले गम्भीर प्रकृतिको लापरबाही भएको ठहर गरेको हो। समितिले तत्कालीन समयमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकृतहरुले लापरबाही गर्दा प्रहरी संगठनको समेत बदनाम भएको जनाएको छ । गल्ती गर्ने अधिकृतहरुल... थप पढ्नुहोस्